Teny Faneva (taglines): Inona izy ireo ary ahoana no ampiasana azy · Global Voices teny Malagasy
Teny vitsy monja fanampiny mahalaza be tsy araka ny noheverinao
Voadika ny 05 Mey 2019 5:20 GMT
Tamin'ny volana Febroary, namoaka lahatsoratra am-blaogy izay manambara fanampiana vaovao ao amin'ny endrika WordPress-n'ny GV i Jer: ny lisitra fanarahamaso ny fanamarinana lahatsoratra.
Ao ankavanan'ny varavarankely fanoratana, mitahiry ny isan'ireo teny nampiasaina ilay lisitra fanarahamaso ary mampahatsiahy antsika mba hanisy lohateny, famintinana ary fitaovana iray tsy dia nampiasaintsika loatra tato amin'ny GV: teny faneva.
Tsy voatery asiana ao amin'ny tantara GV ny teny faneva, saingy ny teny faneva tsara iray dia afaka manamafy ny firotsahana ao anaty tantara iray amin'ny fisintonana ny fahalianan'ny mpamaky.
Mikasika ireo tenimarika
Ilay andalana tonga dia ao ambanin'ny lohateny no teny faneva. Fantatra amin'ny anarana hoe fanampin-dohateny, lohateny lehibe, na dek ihany koa izy io.
Mametra ho azy ny halavan'ireo famintinana sy teny faneva ny firafitry ny WordPress-ntsika –raha ny amin'ireo teny faneva, teny 10 ihany no fetra. Matetika mahatonga azy ireo sarotra hatao izany, fa tokony hanamora ilay dingana ny fahatakarana ny tanjon'ireo teny faneva sy ny fiasany.
Tokony hiara-hiasa ny lohateny sy ny teny faneva. Ny teny faneva tsara dia:
Miara-miasa amin'ny lohateny
Manampy (fa tsy mamerina) ny lohateny
Matetika hanome fitaovana fampahalalambaovao hafa izay mampandroso ny tantara
Manome zava-misy na hevitra fohy, na angamba mampihomehy izay afaka manampy amin'ny fisintonana ny sain'ireo mpamaky
Matetika fehezanteny feno
Ny teny faneva dia TSY:
Fanambarana ankapobeny mikasika ilay tantara
Ireto misy ohatra vitsivitsy:
Ao anatin’‘ity lahatsoratra eto ambany ity, nitatitra mikasika ny blaogera roa any Maoritania izay miatrika fiampangana ho nanala-baraka noho ny fanaovana tatitra mikasika ny kolikoly i Afef. Araka ny hasarotr'izany olana izany ary koa ny hafohin'ilay tantara, nisafidy lohateny fohy sy tsotra izahay.
Ho an'ilay tenimarika, nisafidy zavatra fanampiny iray avy amin'ilay tantara izay mampiseho amin'ny fomba manaitra ny zavatra manjo ireo blaogera izahay. Tsy vitan'ny hoe niakatra fitsarana izy ireo fa notaterina ihany koa fa tsy voakarakara araka ny rariny izy ireo na nomena dingana sahaza. Antsipirihany iray manabaribary ny zava-misy fa tsy nampiseho porofo, na iray aza, ireo mpampanoa lalàna mba hiampangana ireo blaogera ireo: milaza izy ireo fa nahitra porofo, saingy hoe ”very” izany. Nampiasa izany pitsopitsony izany tao anatin'ilay teny faneva izahay.
LOHATENY: Maoritaniàna Bilaogera. Miatrika Fanenjehana ho Nanàla Baràka Tamin'ny Filazana Kolikoly
TENY FANEVA: Lazain'ny mpampanoa lalàna fa ‘very’ ny porofo anenjehana ireo bilaogera
Ho an'ity lahatsoratra amin'ny ”filaza voalohany” ity, nosoratan'i Laura Vidal mikasika an'i Luis Carlos Díaz, mpandray anjara ato amin'ny GV, nofidianay ny lohateny iray mampiala voly natao mba hisintonana mpamaky amin'ny fanondroana hatsikana malaza mitondra ny anarana hoe ”tongasoa eto amin'ny aterineto”.
Mariho ny fifamaliana misoko eo amin'ireo singa roa ireo. Tsy ahitana afa-tsy ny anaran'izy ireo ny lohateny, manondro ilay hatsikana malaza ary milaza ihany koa fa i Venezoela no resahina amin'izany. Manambara avy eo ilay teny faneva fa mpivady i Luis sy i Naky ary feo mandrisika an-tambajotra ao Venezoela izy ireo.
Miara-miasa amin'ireo singa roa hafa mba hanome fampahalalam-baovao misimisy kokoa mikasika ilay mpivady ilay sary lohapejy: tsara ho fantarina fa tanora izy ireo ary ahitana singana hatsikana sy zava noforomporonina ny asan'izy ireo. Manasa ny mpamaky mba hiezaka ny hahafantatra azy ireo izy.
LOHATENY: Tongasoa eto amin'ny Aterineto Venezoeliana. I Luis Carlos sy i Naky no hitari-dalana anao.
TENY FANEVA: Fantaro ireo Mpivady mahery indrindra ao amin'ny Aterineto Venezoeliana.
Ao anatin’ity tantara nosoratan'i Alexey ity, manampy zavatra antsipirihany vaovao sy tsy nampoizina izay manampy ny lohateny efa manome vaovao marobe ilay teny faneva.
LOHATENY: Mety ho vaovao diso fotsiny ireo honohono momban'ny raharaha ‘vaovao diso’ voalohany indrindra tao Rosia anenjehana toeram-piasan'ny haino aman-jery iray
TENY FANEVA: Nilaza ilay tantara diso fa nandràna ny yoga any am-poja ireo manam-pahefana.
Ho an'ny tantara GV -nao manaraka, manandrama ny teny faneva!
Mamakia bebe kokoa: Torohevitra amin'ny fanaovana lohateny
Mamakia bebe kokoa: Torohevitra amin'ny fanoratana famintinana
20 ora izayAzia Afovoany sy Kaokazy